Company Nhanganyaya - Ningbo YH Hydraulic Machinery Factory
One Wire vakaruka Hoses
Two Wire vakaruka Hoses
A nyanzvi mugadziri uye mutengesi hydraulic Fittings, ferrules, hoses, michina uye hosipaipi nemagungano.
Ningbo YH Hydraulic Machinery Factory hwakagadzwa muguta rakanaka, Ningbo ndiro inozivikanwa Beilun chiteshi. YH Hydraulic ari kushandiswa fekitari inobereka uye zvokushandisa vakaruka rabha hoses, hosipaipi Fittings, hosipaipi ferrules, mukuru kumanikidzwa hosipaipi magungano, crimping michina, etc. Paaiva mugadziri, YH achingoramba kutevera hwakanaka hwakaderera kukudyira. Saka isu kudzora zvinhu izvo
zvinofanira kutengwa kubva pamutemo simbi makambani uye neezvitendero uye hwakanakisisa. Uye isu vakaita chinhu revatema kugadzirwa hurongwa iyo hwakavakirwa yepamusoro kukoshesa.
Sezvo mutengesi, zvigadzirwa edu aivigirwa kuti nyika uye vakatengesa munyika kwemakore anopfuura 8. Tine akachenjera yokutengesa chikwata vari kuongorora Misika itsva, kukura vangangozova vatengi, nekugadzirisa matambudziko, uye kushumira vatengi akarayira zvakanaka. Tiri yemakwikwi uye ushamwari cooperator uye chinangwa chedu ndechokuti tose tibatsirwe uye kwenguva refu akanaka pamwe.
Zvakaoma yepamusoro kuzvidzora; Runziro uye-chaicho nguva rutsigiro; Chakapedza pashure-okutengesa basa
We anoreva zvakaoma mana zvinhu (zvinhu importing kudzora → dzaFord Kudzora → QC dhipatimendi kudzorwa → logistic dhipatimendi kuzvidzora) uye unhu kudzora gadziriro nechokwadi ose zvigadzirwa isina kuparara pamberi pakukurukura. Kugadzirwa yedu muitiro une zvikwiriso zvisere: zvinhu gadziriro; chiridzwa lathe kugadzira; CNC machine kugadzira; cheek uye netsvina nokubvisa; zingi yakanamirwa pamifananidzo; yokupedzisira nouwandu kuongorora; kurongedza uye kununura. Zvakafanana, isu acharonga rokuongorora
nguva mana munguva kugadzirwa mumwe murayiro. Products kuti miganhu zvakarurama zvinodiwa achiongorora vachakupai inotevera danho.
Kamwe pavhiki, redu QC dhipatimendi kuongorora CNC michina nezvimwe equipments kuitira basa ravo rakanaka.
The inobudirira uye chaiyo-nguva rutsigiro inokosha zvikuru vatengi. Makasitoma edu anogona kuwana nayo yedu paIndaneti Chatting mudziyo (Skype) iro nhema nechepasi website. Kana paemail kwatiri chero zvigadzirwa kuziva, zvinodiwa, kana matambudziko. Nokuti pakarepo kuonana, foni yedu riripo kwemaawa 24 pazuva. Uyewo isu kuunganidza zvose mibvunzo nemhinduro akaratidza pamusoro FAQ. Somunhu yakavimbika nokutengesa, tinoramba nekugadzirisa matambudziko zvinogutsa uye zvinogamuchirika.
Asi pasinei kukurairisai isu kudzora unhu uye sei nenyanzvi tinoshumira, hapana 100% zvigadzirwa vari vakakwana. Saka isu mushure-okutengesa basa zvinogona kuvimbisa kwedu unhu zvinhu uye nehana kambani kupa tiri. We vanoomerera tichiteerera pazasi zvinangwa zvitatu:
Kugadzirwa Our uzivi:
→ hwakanaka; Innovation uye kudzivirirwa Environmental
Marketing Our pfungwa:
→ Mutual zvikomborero; Kugutsa zvinodiwa pamusika; Kuchengeta hwakanakisisa zvinhu uye kushandira vatengi
Basa redu tenet:
→ vachidarika chido chako; Kuva zvikuru akavimbika uye increment kambani
Carbon Steel Hydraulic Fittings , arşive Pex Pipe Brass Fittings , Fittings Hydraulic, Hose Crimping Machine , Hydraulic Hose Fitting , Carbon Steel Hydraulic Hose Fittings, All Products